Aqoon Lagama Xishoodo Dhibaatooyinka Ay Leedahay Siigada Hablaha!!! | shumis.net
Home » galmada » Aqoon Lagama Xishoodo Dhibaatooyinka Ay Leedahay Siigada Hablaha!!!
Aqoon Lagama Xishoodo Dhibaatooyinka Ay Leedahay Siigada Hablaha!!!
OGOOW:- Siigada Farta macno ahaan waxaa loola jeedaa in gabarto ama haweeneeda aay
isticmaasho farteeda iyadoo xiligasi dooneysa in aay dareenkeeda kacsan dajiso aayna iska keento Biyaha xiligaasi gubaya jirkeeda.
Isticmaalka siigada farta ee dumarka ayaa waxaa aay keentaa dhibaataooyin badan iyadoo aaysna ku ekeen oo kaliya farta aayna jiraan dumar isticmaala Muuska oo iyagana kusababa dhibaatao Mustaqbal oo xoogan.
Dr: Heakler oo ah nin ku taqasuusay xanuunada haweenka kuna nool dalka inkiriiska ayaa sheegay in siigada dumarka qaasatan kuw aadeegsado aay fartood iyo waxyaabo lamidaa sida mooska iyo Caaag usameysan sidii xubinta raga ee taraanka isagoona xusay in aay ku qasabto arinkaasi waxyaabo dib udhigi kara nolasha qofka dumarka ah.
Dhibaatooyinka aay kala kulmaan arinkaa dumarka waxaa kamidaa hadii ay si xoog farta u adeegsato waxaa laga yaabaa inay sidaa ku bikarjabto muddo ka dib iyadoon is ogeyn.
gabdhaha qaar waxay adeegsadaan
Qalinama wax la mid si ay ugu xoqxoqaan dibnaha farjiga taas oo ay ka helaan raaxo kaddib qaar baa sidaa ku biyabbaxa balse waxaa jira dhibaatao xoogan oo soo gaarta xubinta taraanka ee qofkaasi.
n aad naceeb u qaado guur ama galamaad Labka (Raga) oo aad halkaasi ku weyso guurka mustaqbalkeega aayna noqoto qof ku gaboobo doobnimo iyo caruur la” aan.
in Cuduro ama egfashin xoogan uu garaao xubinta taraanka iyadoo lagayaabo in xanuun ama cudur oo ku dhaco ilmo galeenka naagta.
Daraaasaad lasameeyay waxa lagu soo ogaaday in 60% haweenka aduunka aay isticmaalaan ama aay biyaha isaga keenaan qalab sida xubinta caagaa ee loo adeegsanaayao siddi raga oo kale iyadoona aay sidoo kale dumarka soomaaliyeed qaarkood aay yihiin wa saaid u isticmaala gacaanta ama farta taasi oo lagayaabo in sanadaah soo socda aay soo ifbaxaan dhibaatooyin soo garaay dumarkaasi.
Title: Aqoon Lagama Xishoodo Dhibaatooyinka Ay Leedahay Siigada Hablaha!!!